"... enye yezona ntengiso zibalaseleyo kwi-airbnb." - I-Airbnb
"... enye yezona ntengiso zibalaseleyo kwi-airbnb."
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguVitor
I-93% yeendwendwe zakutshanje inike uVitor iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Eyona ndlu intle kweyona ndawo intle kwisiqithi saseTerceira, iimitha ezimbalwa ukusuka elwandle, enendawo yokuloba kunye neendawo zokuqubha zendalo ezimangalisayo. Kwakhona kufutshane neMyuziyam yeWayini yasekhaya, kunye nevenkile ethandekayo yepastry, enesidlo sakusasa esimnandi.
Indlu enobuhlobo, ekhululekile kwaye ixhobe ngokupheleleyo, ibekwe kwilali entle yaseBiscoitos, phakathi kweAngra do Heroísmo kunye nePraia da Vitória izixeko eziphambili. Imvakalelo yemveli kunye neyanamhlanje.
Ikhaya elinobubele kunye nolwamkelo kude kube ngabantu aba-4 kwiSiqithi saseTerceira kwiziqithi zaseAzores kumbindi woLwandlekazi lweAtlantiki.
ICasa da Vinha Grande yindlu esecaleni kwezidiliya zosapho kwaye ngokuba sesona sidiliya sikhulu kuzo zonke saziwa ngokuba yiVinha Grande. Ngoku ifunyenwe, yindawo emnandi edibanisa isiko lendawo kunye neyale mihla yezinye izinto kunye neenkcukacha zoyilo olunomdla.
Le ndlu inegumbi elikhulu elijonge emazantsi kwaye lijonge kwintendelezo, elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela elifakelweyo, ikhitshi, igumbi lokuhlala elineebhedi zesofa yabantu ababini, i-pantry, i-terrace ejonge ulwandle emantla kunye neenduli ezisemazantsi, apho unokuphumla khona ufunda. incwadi okanye ilanga.
Kufuphi nolwandle, amachibi endalo, iimarike zalapha ekhaya, kunye neMyuziyam yeWayini edumileyo. Usenako ukutyelela ezinye iindawo zembali ezintle ezifana neziko leAngra do Heroismo, iNdawo yeLifa leMveli yeHlabathi yiUNESCO ngenxa yolwakhiwo.
Indawo egqwesileyo yokuhamba kunye nokukhwela ibhayisekile, enembono entle ezintabeni okanye elwandle. Ungabona kwezinye iindawo ezijikeleze iminyhadala yemveli efana neenkunzi zenkomo zasesitalatweni, icarnivals, iminyhadala, ihlobo okanye eminye iminyhadala yenkolo ngeenkulungwane zembali.
Kukwakho nobonelelo oluhle lwezithuthi zikawonke-wonke ukuba awufuni ukurenta imoto.
4.58 out of 5 stars from 75 reviews
4.58 · Izimvo eziyi-75
Ummelwane othandekayo nozolileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Vitor
Iindwendwe zinganditsalela umnxeba nanini na xa zifuna. Ukuba kunokwenzeka ndizobakho nanini na, ukuba akunjalo, ndingathumela umntu oza kum.
Inombolo yomthetho: AL1176
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Biscoitos